Askari ka tirsan Booliska USA oo Fal fool xun kula kacay Wiil SOMALI AH. - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaad loo hadal hayaa dalka Mareykanka Askari ka tirsan Ciidanka Booliska dalkaasi oo fal fool xun kula kacay Wiil Soomaali ah.
Muuqaal la soo dhigay Twitterka ayaa muujinayo Sarkaalkaasi oo Dareewal Soomaali ah surka ka qabtay, kadibna cadaadiyey, si uu gaarigiisa uga kaxeeyo goob gaadiidka la dhigtay oo ku taalla Degmadda Richfield ee Gobalka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Dhacdadan ayaa dhacday bishii October 3-dii, kadib, markii Sarkaalkaasi uu madaxa ka garaacay Ninka Soomaaliga oo lagu magacaabo Kamaal Geelle oo 19-jir ah.
Xafiiska Xeer-ilaaliyaha ee Hennepin, ayaa sheegay inay dib u eegeen baaritaanka kiiskaasi, waxayse ka gaabsadeen inay Sarkaalka ku soo oogaan dacwad.
Dhinaca kale, Agaasimaha Fulinta ee Guddiga Xuquuda Aadanaha Soomaalida ku nool Maraykanka, Omar Jamal ayaa sheegay in ay Dhibanaha iyo Waalidkiisa isbuucan la kulmeen Saraakiil ka tirsan Qeybta Boliska ee Degmadda Richfield, isla markaana qorsheynayaan inay Dacwad ku soo oogaan Qeybta Boliska ee Degmadaasi.